सुख-दुःखमा सहकारी ! - सहकारीखबर
सुख-दुःखमा सहकारी !
Share : 5,290
आज एक जना साथीले एउटा कुरा म सँग सेयर गर्नु भयो । बैंकबाट ऋण लिएको छु, फोन गरेर किस्ता तिर्न आउनु होला भन्यो । तीन वटा सहकारीमा थोरै थोरै सेयर राखेको छु । सानो तिनो बचत पनि गरेको छु भने एउटामा त ऋण समेत लिएको छु । दुई वटाले फोन गरेर केही अफ्ट्यारो छ की हजुरलाई भन्यो । एउटाले ऋणको ब्याजमा लकडाउन सुरु भएको मितिदेखि १० प्रतिशत छुट दिएका छौं र हर्जना ब्याज लाग्दैन यो समयमा घरमा नै बस्नुहोला । सुरक्षित रहनु होला । यदि अफ्ट्यारो परेमा कार्यालयमा वा सम्पर्क व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्नु होला भनेर फोन नम्बर समेत दिनुभयो । संस्थाले एसएमएस समेत गर्यो । सहकारीमा भन्दा बढि बचत बैंकमा नै रहेछ, ऋण नै लिएको भएता पनि हिसाब हेरेको त । किन यस्तो बेलामा सहकारीले जस्तो व्यबहार बैंकले गर्न नसकेको होला सर ?, बल्ल सहकारीको सहकार्य बुझें । मैले उहाँलाई भने तपाईको सुख दुःखको साथी सहकारी नै हो बैंक त सुखको साथी मात्र हो । बरु तिन वटामा नभै एउटा सहकारीमा मात्र सदस्य रहनु होला मेरो अनुरोध । हुन पनि हो हाम्रो संस्थाका दुई दर्जन भन्दा बढी बैंकमा खाता छ । सधै निक्षेप दिनु पर्यो भनेर माकेर्टिङ गर्ने बैंकले हजुरहरुको संस्थालाई रकम चाहिएको छ की ?, भनेर एक कल समेत फोन गरेको छैन । बरु हजुरको निक्षेपमामा ब्याज १, २, ३, ३.५ प्रतिशत भयो भनेर फोन आएको छ । यो मेरो पनि अनुभव हो । यहि नै छ फरक सहकारी र बैंकमा । बैंक नचाहिने हैन चाहिन्छ तर नाफा कमाउन मात्र लाग्नु भएन हो । देख्नु भएन क्याहो पैसाले केही गर्दैन भन्ने कुरा । जसरी बचतमा ब्याज घटाउनु भएको छ त्यसरी नै ऋणको ब्याज समेत छिटै घटाई दिनु होस् मेरो अनुरोध ।
यी माथिका हरफहरु पोखरामा रहनु हुने सहकारीकर्मी मित्र मीलन ढकालले आफ्नो फेसबुकको स्टाटसमा लेख्नुभएको हो । मलाई मार्मिक लाग्यो, अनि एउटा सहकारीका सदस्यहरुको यर्थाथ चित्रण गरिएको पाँए । बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई गर्ने व्यवहार र सहकारीले आफ्ना सदस्यहरुलाई गर्ने व्यवहारको यथार्थ वार्तालापका अंश मीलन सरले हुवहु लेखेर सबैलाई सेयर गर्नु भएको छ ।
मानिस कसैसँग प्रत्यक्ष भेट नभए पनि उहाँको विचार, व्यवहार र गरिने क्रियाकलापबाट प्रभावित भएको हुन्छ । मैले पनि मीलन सरलाई प्रत्यक्ष भेटेको छैन फोनमा दुई पटक गफ गरेको छु । उहाँसँगको फोनको गफ र उहाँले सहकारीको बृद्धि विकासमा गरेका गतिवीधिले म प्रभावित भएको छु । उहाँको अनुमति लिदैं यी माथिका भनाईबाट मैले यो लेखको थालनी गरेको हुँ ।
हामी सहकारीकर्मीले गर्व गर्ने संस्था पोखरा रोयल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कास्कीको मुख्य व्यवस्थापक भएर सहकारीको वृद्धि विकासमा विगत २ दशकभन्दा बढी समयदेिख उहाँको योगदान निरन्तर रहेको छ । उहाँको त्यो स्टाटसमा धेरै कमेन्ट आएको छ । प्रसंसनिय कमेन्टहरुले पनि सहकारीको मर्मलाई सार्थक बनाएको छ । एउटा संस्थाको जिम्मेवारी पदमा बसेर सदस्यहरुको यो अवस्थामा के स्थिती रहेको छ भनेर उहाँहरुको वार्तालापले पनि प्रष्ट पारेको छ । मलाई लाग्छ उहाँको त्यो वार्तालापका कुराहरु धेरै मानिससँग मिल्छ होला । यो विषम परिस्थितीमा मानिस कसरी बाँच्ने भन्ने अवस्थामा बैंकबाट बारम्बार फोन आएर तनाव नै बनाएको होला । व्यवसायीहरुको व्यवसाय सञ्चालनको कुनै टुङ्गो छैन । आफ्नो उधारो बेचिएको पैसा उठने छाँटकाँट छैन तर बैंकको बारम्बारको फोनले व्यवसायी त्रसित भएका छन् । लकडाउन अगाडी सहकारी संस्थामा बचत लिनको लागि बारम्बार फोन गर्ने बैंक, ब्याजको प्रलोभन देखाउने बैंक, निरन्तर सम्पर्कमा रहने बैंक आज यो विषम परिस्थीतिमा चुप छन् । भरसक सहकारीहरुले बचतमा रहेका पैसा नझिकिदिउ न भनेर बसेका छन् । बचत फिर्ता जाने पो हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । अनि थाहै नदिई ब्याज घटाएका छन् । सहकारी र बैंक एक अर्काका परिपुरक संस्था हुन् । दुबै संस्था वित्तिय कारोबार गर्छन् । बैंकहरुले धितोमा कारोबार गर्छन भने सहकारीहरुले विना धितोमा पनि कारोबार गर्छन । बैंकको पहुँच नभएको ठाँउमा सहकारी पुगेका छन् । वित्तीय साक्षरता गराएका छन् । अनि थोरै थोरै गर्दै बचतको बानीको विकास गराएका छन् । जहाँ बैंकले ग्राहाक पत्याउँदैन । जहाँ असुरक्षित लगानी सम्झन्छ । ती बैंकका ग्राहक बन्न सक्दैनन् त्यस्ता मानिसलाई सदस्य बनाएर थोरै थोरै विना धितो लगानी गर्दै व्यवसायमा थप पुँजीको बृद्घि गराउँदै धितो नहुनेलाई धितो हुने बनाउँछ । घर नहुनेलाई घरहुने बनाउँछ । र अनि बैंकको लायक ग्राहक सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई बनाउँछ ।
मीलन सरले भनेको बैंक भनेको सुखमा मात्र हो भने जस्तै हो की हैन बैंक ?, त्यो त आजको यो अवस्थामा बैंकले गरेको ब्यवहारले आम मानिसले बुझ्नु भयो होला ! अनि सहकारी संस्थाले यो अवस्थामा तपाईलाई गरेको ब्यवहार पनि सदस्यहरुले महसुस गर्नु भयो होला । यो अवस्थामा आफ्ना सदस्यहरुको अवस्था कस्तो छ ?, सदस्यहरुलाई अफ्ट्यारो परेको खण्डमा सहयोग गर्न तयार रहेको धेरै सहकारीहरुले बताएका छन् । सामाजिक उत्तरदायित्वमा पनि सहकारी अगाडी रहेका छन् एउटा जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेर कारोबार गर्ने संस्थाले यो विषम परिस्थीतिमा सरकारलाई ५ लाखभन्दा माथि आर्थिक सहयोग गरेका छन् भने एउटा प्रदेश भन्दाबढी कार्यक्षेत्र रहेका बैंकहरुले पनि ५ लाख नै आर्थिक सहयोग गरेका छन् यसले पनि सहकारी संस्था र बैंकको सोचाई उजागर गरेको छ । सहकारी संस्थाहरु आफ्ना सदस्य प्रति र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति सचेत छन् । सरकारलाई सहयोग गर्न अग्र पंक्तिमा रहेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण झापाका सहकारीहरुलाई लिन सकिन्छ । जसले राहातको नाममा होस् कि अन्य कुनै पनि सामाजिक गतिविधिमा सहकारी संस्था अग्र पंक्तिमा रहने गर्दछ । सहकारी संस्था पनि बचत तथा ऋणकै कारोबार गर्ने भएको हुँदा सदस्यहरुलाई लगानी गरिएको ऋणले सदस्यहरुलाई बोझ नबनोस् । ऋण भनेको भारी हैन यो त आफ्नो व्यवसायलाई वृद्घी गर्न थप पुँजी हो । जसले व्यवसाय वृद्धि विकासमा ठुलो भूमिका खेल्छ । आय आर्जनमा बढोत्तरी गराउँछ । सदस्यहरुको बचत सदस्यहरु मै लगानी गरेर सदस्यहरुको वृद्घि विकासमा योगदान पुर्याउने सहकारीको उद्देश्य रहेको हुन्छ । सदस्यहरुको सुखमा मात्र हैन दुःखमा पनि सहयोगी सहकारीहरु बनेका छन् ।
बैंकले ग्राहकलाई ऋण दिन्छ अरु सबै लिन्छ । तर, सहकारीले सदस्यहरुलाई सेयर दिन्छ । सेयरमा लाभांस दिन्छ । बचतमा व्याज दिन्छ । तिरेको ब्याजर आर्जन गरेको ब्याजको आधारमा संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष दिन्छ । मृत्यु राहात दिन्छ । उपचार खर्च दिन्छ । महामारीमा ब्याज छुट दिन्छ । विषम परिस्थीतिमा ऋण मिनाहा दिन्छ । हर्जना छुट दिन्छ । बिमा गरी दिन्छ । रोजगारी दिन्छ । सिप तालिम दिन्छ । नेतृत्व विकास, व्यक्तित्व विकास गराउँछ । पहिचान दिन्छ । समाजमा स्थापित गराउँछ । करमा योगदान दिएको छ । आर्थिक सहयोग गरेको छ । स्थानिय सरकारसँग हातेमालो गरेको छ । बैंकिङ ज्ञान दिएको छ । पुरस्कार, सम्मान दिएको छ । क्षमता अभिवृद्घि गराएको छ । जन्मदेखि मृत्युसम्म आर्थिक सहयोग गरेको छ । सुखमा त साथ सबैले दिएका छन् तर दुःखमा साथ सहकारीले दिएको छ । त्यसैले पनि हामीले सहकारीको महत्व बुझाउनु पर्छ ।
वित्तीय कारोबार मात्र नभएर हरेक गतिविधिमा सहकारीको योगदान रहने छ । सहकारी ऐनले पनि २०७७ साल असोज मसान्तसम्म एक व्यक्ति एक सहकारी भनि सकेको अवस्थामा हामीले पनि आजैबाट एउटा सहकारीको मात्र सदस्य बनौं । कानुनमा दण्ड जरिवानाको पनि व्यवस्था भएको हुँदा अब हामी धेरै सहकारीमा सदस्य बन्ने भन्दा आफुलाई राम्रो लागेको संस्थाको सदस्य बनौं । सेवा सुविधा एउटाबाट लियौं धेरै सहकारीमा सदस्य बन्दा सबैबाट सेवा सुविधा लिन पाईने छैन । दण्ड जरिवानको भागिदार बनिनु पर्ने हुन सक्छ तसर्थ आजै प्रण गरौं ‘एक व्यक्ति एक सहकारी’ । र यो विषम परिस्थीतिमा सहकारीको महत्वलाई उच्च बनाऔं । सहकारीलाई सुरक्षित बनाऔं ।
(लेखक शिखर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बिर्तामोड झापाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ)